Blockchain Izindaba 04.06.2018 - Blockchain Izindaba
Blockchain Izindaba 04.06.2018
Bittrex kuzovumela zimali ukuthenga cryptocurrency nge aseMelika
Abatshalizimali manje banethuba entsha ukuthenga cryptocurrencies ngamadola wase-US.
Bittrex, a Seattle ezisekelwe cryptocurrency lokushintshisana, ifinyelele esivumelwaneni evumela abagcini zimali ukuba ukuthenga zemali digital ngamadola wase-US. Esikhathini esedlule, zemali kuphela lwamasheya luzokwenziwa Coinbase, lwemali digital eCalifornia, sasitholakala zamadola. Yilokho ingxenyana cishe 1500 zemali digital sintanta cryptocurrenices yonke.
Ukuthenga ezinye zemali, zimali kwadingeka kuqala ukuguqula imali yabo Bitcoin. Manje kufanele Bittrex.
Umsunguli CEO Bill Shihara watshela CNBC ukuthi lo mgomo “ukuze sandise nezimakethe amaningi ngangokunokwenzeka ku Bittrex,” Wathi ngoLwesihlanu “Fast Imali.”
“Kanye ukhulisa khona, zonke ikhasimende ku Bittrex bazokwazi ukufinyelela ukuhweba US dollar,” uthe.
Ukushintsha ndlela kungakusiza ngisho ukuhambisa emakethe. Njengoba abaningi kakhulu zemali angase kuphela ethengwa ngokusebenzisa Bitcoin, ukubaluleka Bitcoin nezinye yezinhlobo eziningi digital kwehlisa eduze. manje Inani zalamaqembu.I mfihlo angase aqale ukusingatha decouple kusukela Bitcoin, Shihara wathi, njengoba abatshalizimali lokudayisa zamadola.
okwamanje, cishe 200 yebuhhehlu leyehlukene digital kungenziwa lwamasheya luzokwenziwa Bittrex. I-CEO wawuthi “ezincane, Inombolo akhethiwe uqalisa abalingani” usebenza emakethe yamasheya ukukhokha kumadola.
“Okwamanje asikezwa ehlola uhlelo lwethu,” uthe. “Sisebenzisana namabhange ukuze uqiniseke bakwazi ukucubungula FIAT imali kanye Ukuzihoxisa, kanti injini thina ukudayisa uzokwazi ukuphatha cargo kahle.”
Cryptocurrency uhlala kakhulu angahlelekile e-United States, okubangela izikhungo eziningi zezimali kanye zimali ziqaphe zemali e landscape lokukhwabanisa okwandile mbumbulu ICOs. Okunye abahwebi usufunisisile izimakethe angaphandle ukutshala impahla digital ezifana Bitcoin.
Kraken Daily Market Umbiko 03.06.2018
$139M adayiswa kuwo wonke ezimakethe namuhla
Apple wabasunguli Steve Wozniak luthemba Bitcoin iba nohlobo lwemali olulodwa global
CEO Twitter Jack Dorsey muva wathi uyakholelwa bitcoin iyoba lwemali yomhlaba eyodwa, into Apple wabasunguli Steve Wozniak luthemba kuzokwenzekani.
“I ukuthenga lokho Jack Dorsey uthi, ukuthi mina ngempela ukholwa ukuthi kuzokwenzekani, kodwa ngoba ngifuna kube njalo, okungukuthi ukucabanga okumsulwa ngakho… Bitcoin is izibalo kuchazwe, kukhona ubuningi ezithile bitcoin, ikhona indlela ukuthi basakaza ... futhi okumsulwa futhi azikho ukugijima womuntu, akukho inkampani isebenza futhi kungcono nje ... likhula ... ukusinda, ukuthi kimi uthi into yemvelo kanye nemvelo kubaluleke ngaphezu kwabo bonke imihlangano yethu womuntu.”
10 izitayela ukuthuthukiswa imboni mfihlo e 2018
Ongoti I Ele ...
Blockchain Observatory futhi Forum Oyoletha EU "phambili" ka Blockchain Tech
EU Iqalisa Blockcha ...
Umbani Labs kudala "kwenqaba" ukuze anqande ekhanya imikhonyovu.
Umqondo we-pr ...
Thumela Previous:Ethereum Wallet ImToken has $ 35B ezifakwa, Ngaphezu kwe 99% US amabhange
Thumela Landelayo:Blockchain Izindaba 05.06.2018